ओमानसामु अमेरिकाद्वारा २ सय १४ रनको लक्ष्य ! जित कस्को ? - News20 Media
February 6, 2020 February 6, 2020 N20LeaveaComment on ओमानसामु अमेरिकाद्वारा २ सय १४ रनको लक्ष्य ! जित कस्को ?
काठमाडौं । विश्‍वकप क्रिकेट लिग डिभिजन-२ अन्तर्गत बुधबारबाट काठमाडाैंमा सुरु भएको त्रिदेसीय अन्तर्राष्ट्रिय श‍ृंखलाअन्तर्गत दोस्रो दिन जारी खेलमा अमेरिकाले ओमानसामु २ सय १४ रनको विजयलक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।
त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको अमेरिकाले निर्धारित ५० ओभरमा सबै विकेट गुमाएर २ सय १३ रनको योगफल तयार गर्‍यो। अमेरिकाका लागि इयान होल्याण्डले सर्वाधिक ६५ रनको अर्धशतकीय इनिङ खेल्दा अक्ष होमराजले ४४ तथा मोनन्क पटेलले १९ रनको योगदान गरे।
अन्य ब्याट्सम्यानले उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न नसक्दा ओमनका लागि मोहम्मद नदिमले सर्वाधिक ३ तथा बिलाल खान, कप्तान जिसन मक्सुद र अकिव इलियासले २/२ विकेट लिए। टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेको ओमनका लागि कलिमुल्लाहले एक विकेट लिए।
बुधबार भएको पहिलो खेलमा नेपाललाई १८ रनले पराजित गरेको ओमनलाई आजको खेलमा जितका लागि ३ सय बलमा २ सय १४ रन आवश्यक छ।